Submitted by tunkhine on Wed, 05/27/2009 - 10:15
၁။ ICT Industry ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုစေရန်
၂။ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ICT အသုံးချမှုများ တိုးတက်လာစေရန်
၃။ ICT နည်းပညာအသစ်များ ပေါ်ထွန်းလာစေရန် ဟူသော ရည်ရွက်ချက်များဖြင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ စပြီး တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ချီးမြှင့်သည့် ဆုဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်လို ရွေးချယ်တာလဲ၊ ဘယ်သူတွေကရွေးချယ်တာလဲ . . . ?
အဆိုပြုလွှာများကို တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် လက်ခံပြီး၊ ယင်းအဆိုပြုခံရသူများထဲမှသာ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်း၏ အလုပ်အမှုဆောင်များက ဆု၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အကိုက်ညီဆုံး အထိုက်တန်ဆုံး တစ်ဆုကို စနစ်တကျ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ပါသည်။
ဆုအတွက် ဘယ်လို အဆိုပြုရမှာလဲ . . . ?
MCPA Excellence Award 2008 ဆုအတွက် အဆိုပြုမည်ဆိုလျှင် -
၁။ လူတစ်ဦး (သို့) အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ၄င်းတို့၏ ICT အကျိုးပြုဆောင်ရွက်ချက်များကြောင့် အဆိုပြုနိုင်ပါသည်။
၂။ ဈေးကွက်အတွင်း ထုတ်လုပ်ရောင်းချလျှက်ရှိသော ICT Product (Software or Hardware) တစ်ခုအား အဆိုပြုနိုင်ပါသည်။
၃။ ဈေးကွက်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ICT Solution တစ်ခုအား အဆိုပြုနိုင်ပါသည်။
၄။ ICT Project (Thesis) တစ်ခုအား အဆိုပြုနိုင်ပါသည်။
မည်သူမဆို အဆိုပြုလွှာပုံစံကို ရယူဖြည့်စွက်၍ (သို့မဟုတ်) စာရွက်အလွတ်တွင် ရေးသား၍၊ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်း ရုံးခန်း (Myanmar Info-tech, Building 4, Room 4, University Campus, Hlaing Township, Yangon, Myanmar. Tel/Fax: 95-1-652276. Email: mcpamm@gmail.com) သို့ ပေးပို့ အဆိုပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် email ဖြင့်လည်း ဆက်သွယ် အဆိုပြုနိုင်ပါသည်။
အဆိုပြုတဲ့အခါ ဘယ်လို အချက်အလက်တွေ ပါရမလဲ . . . ?
အဆိုပြုလိုသော အဆိုပြုခံ (လူတစ်ဦး / အဖွဲ့အစည်း / Product / Solution / Project) ၏ ၁-အမည်၊ ၂-၄င်း၏ လိပ်စာ၊ ၃-၄င်း၏ ဖုန်းနှင့် email၊ ၄-အဆိုပြုရသောအကြောင်း ရှင်းလင်းချက် စသည့် အချက် ၄ ချက်ကို ဖော်ပြအဆိုပြုသင့်ပါသည်။
ကျန်အချက်များ မသိလျှင်၊ အမည်နှင့် အဆိုပြုရသောအကြောင်း ရှင်းလင်းချက် နှစ်ခုကိုမူ မဖြစ်မနေ ဖော်ပြအဆိုပြုပါ။
ဆုတွေကို ကဏ္ဍခွဲပြီး ချီးမြှင့်မှာလား ဒါမှမဟုတ် ဆု တစ်ဆုတည်းသာ ချီးမြှင့်မှာလား . . . ?
ဆု၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အကိုက်ညီဆုံး အထိုက်တန်ဆုံး တစ်ဆုတည်းသာ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
လူတစ်ဦးတည်းမှ အဆိုပြုလွှာ တစ်စောင်ထက်မက ပေးပို့အဆိုပြုနိုင်ပါသလား . . . ?
Read more about MCPA Excellence Award 2008
Submitted by mcpaadmin on Fri, 03/13/2009 - 23:13
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏ ၂၀၀၉ခုနှစ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး စာနယ်ဇင်းများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၃ရက် ညနေ သုံးနာရီတွင် MCPA ရုံးခန်း အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
စာနယ်ဇင်းတွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲသို့ Trust, Time to Time, Personal Computer, Myanmar Times, True News Journal, ခေတ်လူငယ် website, ပြည်မြန်မာ, Internet Journal, Yangon Times, Flower News တို့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
MCPA အတွင်းရေးမှူးဦးငြိမ်းဦးမှ ရှေးဦးစွာ နှုတ်ခွန်းဆက် စကားပြောကြားပြီး လက်ရှိ MCPA ၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီများအကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြာပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ပြန်ကြားရေးကော်မတီမှ ဦးထွန်းခိုင်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် MCPAမှ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းရပ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။
စာနယ်ဇင်းများမှ မေးမြန်းချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဌများမှ အသေးစိတ်ပြန်လည်ဖြေကြား ပေးခဲ့ပါသည်။
၁)တပ်မတော်ခန်းမတွင် ကျင်းပမည့် ICT Exhibition
မတ်လအလယ်နှင့် ဧပြီလ ပထမပတ်အတွင်း
၂)MCPA Professional Week
ဟောပြောပွဲ၊ Developer Forum ၊ ပြိုင်ပွဲ ၊MCPA Excellence Award
ICT Exhibition ရက်နှင့် မရှေးမနှောင်းတွင် ပြုလုပ်မည်။
၃)MCPA Challenge 2009
ဆုကြေးငွေ သိန်း၃၀၊ မတ်လမှစတင် ပြီး အောက်တိုဘာလ နှစ်ပတ်လည်တွင်ဆုပေးမည်
Copy Right ကို MCPA မှယူရန်၊
တစ်ဦးချင်း၊ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့၊အစိုးရဌာန နှင့် ကျောင်းများကို ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ပေးမည်။
၄)MCPA Member Access Center (MAC)
စာအုပ်စာတမ်းများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြည့်တင်းပေးသွားရန်၊
လာရောက်သုံစွဲသူအသင်းသားအရေအတွက်များလာသည့်အလျှောက် PC များ ထပ်တိုးပေးရန်
၅)MCPA Lab တည်ထောင်ရန်
၂၀၀၉ခုနှစ် ပထမ (၃)လပတ်အတွင်း စတင်ဆောင်ရွက်မည်
အသင်းသားများ H/W နှင့် Networking ပညာရပ်များ လက်တွေ့ ဆည်းပူးနိုင်ရန်
ရန်ကုန်မြို့တွင် တစ်လနှစ်ကြိမ် ဟောပြောပွဲများကို တစ်လ(၂)ကြိမ်၊ Workshopကို (၃)လ တစ်ကြိမ်ခန့် ကျင်းပပေးရန်။
ဟောပြောပွဲအချိန်ဇယားကို တစ်လစာသာ ကြိုတင် ထုတ်ပြန်နိုင်ပါမည်။
နယ်အသင်းများရှိရာ မန္တလေး၊ ဧရာဝတီ၊ ရှမ်း၊ စစ်ကိုင်း၊ မော်လမြိုင် တို့တွင် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်စီ ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ပေးရန်။
ICT နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အရည်အသွေး စံများသပ်မှတ်ရန်။ ( ၂၀၀၉ ပထမသုံးလပတ်)
အရည်အသွေး စံများကို ပြည့်မီရန် လိုအပ်သော သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ Course ware များနှင့် စစ်ဆေးရေး စာမေးပွဲများ ပြုစုပေးရန် (၂၀၀၉ ဒုတိယသုံးလပတ်)
MCPA Exam ကျင်းပပေးရန် ၂၀၀၉ ဇွန်လ
Japan ITPEC စာမေးပွဲကို နှစ်ကြိမ်ကျင်းပပေးရန်
မတ်လ Professional weekတွင် တစ်ကြိမ်၊ အောက်တိုဘာနှစ်ပတ်လည်တွင် တစ်ကြိမ် ပြိုင်ပွဲကျင်းပရန်
MCPA web site ကို ပြုပြင်ရေးသားရန်၊ ပြည်ပ domain name နှင့် hosting ယူပြီး ဆောင်ရွက်ရန် www.mcpamyanmar.org
Newsletter ကို ၂၀၀၉အတွင်း ၂ကြိမ်ထုတ်ပြန်ရန်
Read more about Press Release 1/2009
Submitted by mcpaadmin on Mon, 01/19/2009 - 16:34
Speaker : ဦးဇော်မိုးထွန်း ( Director , Myanmar Information Technology(MIT)
Sponsor : Myanmar Professionals Education Centre(MPEC)
Software တစ်ခုရေးသားရာတွင် မိမိရေးသားမည့် Software ကို Maintainable Reusable ဖြစ်လာအောင် မည်ကဲ့သို့ Layer ခွဲ၍တည်ဆောက်သင့်ကြောင်းဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် Application အမျိုးအစား ပေါ်မူတည်၍ Software Architectureကိုမည်ကဲ့သို့ စဉ်းစားသင့်ကြောင်း ကိုလည်း ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးမည်ဖြစ် သည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များ၊ Software Developer များ၊ ကွန်ပျူတာ ပညာလေ့လာနေသူများ နှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
Read more about Seminar "Introduction to Application Architecture Guide"
Submitted by mcpaadmin on Wed, 01/07/2009 - 16:12
ယင်း ဟောပြောပွဲတွင် "Software Development" နည်းပညာရပ်ကို စိတ်ပါဝင်စားပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ Software လုပ်ငန်းခွင် တွင် Programmer တစ်ယောက်အနေဖြင့်သာမက System Analyst, Software Architect အဆင့်အထိ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်လိုသူများ သိသင့်သိထိုက်သော Software Design နှင့် ပက်သက်သည့် သဘောတရားများ၊ အသိပညာ များ၊ နည်းစနစ် များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Read more about Seminar: "Software Architecture with Design Pattern"
Read more about Java Vs .NET Seminar